Lix caado oo aad leedahay balse halis ku ah naftaada - Muraayad
Home Nolosha Lix caado oo aad leedahay balse halis ku ah naftaada
Lix caado oo aad leedahay balse halis ku ah naftaada
Fadlan iska joogi dabeecadahan haddii aad leedahay!
Lix dabeecadood oo halis kugu ah | Image Credit: depositphotos,
Fikir guud oo la aaminsan yahay ayaa qaba qofka ay 21 maalmood ku qaadato inuu la qabsado ama caadeysto ficillo qeyb ka noqda noloshiisa. Mararka qaar waxaan ku tilmaamnaa balwad.
Laakiin Barfasoor Philiooa Lally iyo aqoonyahannada kale ee kala shaqeeya Jaamacadda London waxay caddeeyeen in ilaa 66 maalmood ay khasab tahay inaad kula qabsatid wax marka aad sameyneysid aadan iska celin karin.
In aad iska dhaafto arrin balwad kuu noqotayna waxay qaadan kartaa muddo intaas aad uga dheer. Waa inaad kala baratid waxyaabaha ay faa’iidada caafimaad kuugu jirto haddii aad joogteysid iyo waxyaabaha dhibaatada kaasoo gaari karto.
Haddaba, iska jooji dabeecadahan haddii aad caadeysatay, haddii aadan horay u sameyn jirinna waligaa iska ilaali.
1- Lugaha ha saaranin gaariga Dashboard-kiisa
Dashboard-ka gaariga waa meesha ka korreysa qeybta la siman isteerinka ee aan mararka qaar iska jecel nahay inaan lugaha ku fidsanno.
Inteenna badan caado ayey u noqotaa in ay sidaas sameeyaan mar walba oo aan gaari saaran nahay, ha socdo ama ha taagnaado.
Filimo badan ayaan ku aragnaa in jileyaasha laga soo duubo iyagoo halkaas ay lugaha u saaran yihiin, laakiin marka ay timaado nolosha dhabta ah waxaan ka imaan karta khatar aad u weyn.
Marka laga soo tago in meeshaas ay halis aad u daran ka imaan karto haddii adigoo luga kuu saaran yihiin uu gaariga shil galo, waxaa kale oo aad ogaataa in xitaa ay dhibaato kusoo gaari karto marka uu gaariga fariin deg deg ah qabto ama uu istaago adigoo aan fileynin.
Haddii ay sidaas dhacdo wajigaaga waxa uu si toos ah ugu dhacayaa jilbahaaga, jugtaasina waxay sababi kartaa burbur lafo oo muddo aad u dheer qaadanaya in laga soo bogsado.
Hadda wixii ka dambeeya iska jooji dabeecadda xun ee ah in aad lugahaaga kor saarato marka aad gaariga ku jirtid. Si sax ah ugu fariiso kursiga, suunka badbaadadana xiro.
2- Caag biyo ku jiraan gaariga dhexdiisa ha uga tagin
Haddii aad gaari leedahay ama inta badan raacdid hal gaari oo gaar ah, waxay u badan tahay inaad mar walba ku dhex heysatid gaac biyo ku jiraan.
Laga yaabee in ujeedadaadu ay tahay mid aad uga dan leedahay kaliya inaad isticmaasho marka uu oon ku qabto adigoo meel aan biyo laga helin maraya ama in aad rabto kordhinta biyaha aad maalintii cabtid.
Ma ogtahay in caagga ay ku jirto kiimiko guban karta, haddii ay qorrax xoog leh ku dhacdana uu dab dhalin karo?
Suurtagalnimada in gaac aad uga tagtay gaariga dhexdiisa uu holco aad bay u yar tahay laakiin way jirtaa.
Sidaas awgeed, fadlan maanta laga billaabo ka taxaddar arrintaas, biyahaagana horay usii qaado marka aad gaariga ka dageyso.
3- Telefoonkaaga haku sawirin wax walba oo aad aragto
Taladan waxay u muuqataa mid xoogaa layaab leh maadaama maanta aan wax walba u isticmaalo telefoonnadeenna, gaar ahaan dhinaca sawirrada.
Hase yeeshee, daraasad ay sameysay natiijada Daraasad ay sameysay Linda Henkel, oo ka tirsan Jaamacadda Fairfield ee gobolka California, Mareykanka, ayaa muujisay in haddii uu qofka isku dayo inuu wax walba sawirto uu seegi karo macluumaad muhiim ah.
Ogaalkaaga waxaad diiradda ku saareysaa sawirka qudhiisa halkii aad mudnaan siin lahayd waxa aad sawireysid.
Taasi waxay sababeysaa in aad qaadato sawirro iyo muuqaallo xasuus leh laakiin waxaa ku dhaafaya dareenkii dhabta ahaa ee waxa aad goob joogga u ahayd.
Labo kooxood ayaa ka qeyb gashay daraasaddaas. Waxaa la geeyay goob madxaf ah, koox ka mid ah waxay daawadeen iyagoo aan telefoonno heysanin halka kuwa kalena ay xoogga saareen in ay sawirro ka qaataan goobtaas.
Gabagabadii markii su’aalo laga weydiiyay arrimo ku saabsan madxafka, kooxdii sawirrada sameyneysay waxba kama aysan sheegi karin halka kuwii kalena ay si sax ah u wada xasuusteen.
4- Telefoon dab ku jira ha galinin barkinta hoosteeda
Haddii telefoon charger (dabka lagu buuxiyo batariga) ku jira la galiyo barkinta hoosteeda waxaa ka dhalan kara dab.
Dhibaatadu waa in marka telefoonka hoos la galiyo uu aad u kululaanayo, ugu dambeynna qarxi karo.
Inkastoo telefoonnada casriga ah ay horumar sii gaarayaan, haddana waxaa ku jira qaar uu heer kulkooda aad u badan karo.
Haddii musiibadan ay dhacdo waxaa suuragal ah in naftaada ay halis gasho ama waxyeello kusoo gaarto.
5- Adigoo baahan ha cabin qaxwe (Cofee)
Dad badan ayaa islamarkii ay hurdada kassoo kacaan waxay maalintooda ku billaabaan in ay jikada galaan ama makhaayad tagaan oo ay qaxwe ama coffee cabaan inta aysan wax kale cunin ka hor.
Dabeecaddan waa mid ay wadaagaan dad badan oo ku nool caalamka.
Hal dhib ayaa kuu imaan kara markii calooshaada oo maran aad ku billowdid koob qaxwe ah. Inkastoo uu cofee-ga leeyahay faa’iidooyin badan, haddana wuxuu sidoo kale leeyahay khasaare, waxaana ka mid ah in marka baahi lagu cabo uu sababo gaas, dheefshiidkana waxyeelleeyo.
Marka aad baahan tahay oo aad cunto ka fakareysid, calooshaadu waxay soo deyneysaa aashito, marka ay qaxwada ku dhacdana haddii aysan durba ka dabatagin cunto waxaa sii badanaya aashitadaas, taas oo horseedeysa inuu dhaawac gaaro caloosha.
Khubarada caafimaadko waxay si adag ugu taliyeen in cofee la cabo quraacda kaddib ama galinka dhexe ee maalintii.
6- Jooji cunista Daangada
Qof walba wuxuu jecel yahay in uu daango soo qaato marka uu filim daawanayo, qaarkeenna guriga ayey casariye ahaan ugu sameystaan.
Waa caado soo jireen ah cunista daangada, gaar ahaan marka aad shaleemooyinka joogto.
Laakiin run ahaantii waa caado dhibaatadeedana wadata.
Dhakhaatiirta ilkaha waxay sheegaan in daangada ay waxyeello weyn gaarsiiso ilkaha. Jabab yar yar oo daangada ka mid ah ayaa kala dhex galaya ilkahaaga, lagamana ilaalin karo xitaa haddii aad loo dadaalo.
Arrin kale oo tixgelin u baahan waa in marka aad daango badan cunto ay kuu keeneyso cayil. Isku day in aadan dalbanin daango marka aad filim daawaneyso ama guriga xitaa aadan ku sameysanin intii karaankaaga ah.
Previous articleFaa’iidooyinka shaaha bigeyska ah: Mar dambe ma cabi doontid caddeys
Next article9 Arrimood oo ninkii sameeya ay dumarka jeclaanayaan